कहिले हुन्छ नेपालमा कोरोना भाइरसको अन्त्य ? आयो भविष्यवाणी: हेर्नुहोस – Media Np Online
मुख्य पृष्ठ /News/कहिले हुन्छ नेपालमा कोरोना भाइरसको अन्त्य ? आयो भविष्यवाणी: हेर्नुहोस
काठमाडौं। हिन्दू धर्म दर्शन र ज्योतिष शास्त्रमा विभिन्न ग्रह र राशिहरुको अवस्थितिले कुनै पनि समयको अवस्था, राम्रा नराम्रा विषयबारे जानकारी पाउन सकिन्छ । कतिपय यस्ता वैज्ञानिक कुरा पनि छन् जुन विस्तारै प्रमाणीत हुँदै गएको छ ।
हिन्दु धर्ममा दिनहुँ नुवाउनु, एक अर्कालाई नछुने र विहान घाममा उभिएर सुर्यलाई अर्घ दिने कुरा मानव स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले पनि राम्रा छन् । समय र परिस्थितीका कारण मानिसको ब्यक्तिगत जिवन देखि राष्ट्रराई पनि प्रभाव पर्छ । अहिले विश्वव्यापी भएको कोरोना भाइरसको प्रभाव नेपालमा कस्तो पर्छ भन्ने बारेमा पनि ज्योतिषहरुले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छन् ।
तपाईले व्यक्तिको ग्रह र राशि अनुसार भूत वर्तमान र भविश्यका बारेमा ज्योतिषहरुसंग जान्ने कोशिष गर्नुभएको होला । त्यस्तै ग्रह गोचर राष्ट्रको पनि हुन्छ । त्यस्तै प्रकारले पृथ्वीमा कुन समय कस्तो अवस्था रहन्छ भनेर ज्यातिष विज्ञानले पूर्वानुमान गर्ने गरेको छ । अहिले विश्वमा आएको विपत्तीको कारण पनि ज्योतिषशास्त्रीहरुले ज्योतीषको भाषामा ब्याख्या गरेका छन् ।
ज्योतिष पण्डित डा उत्तम उपाध्यायका अनुसार चैतको पहिलो सातबाट राहु र केतुको संयोगले गर्दा व्याक्टेरिया तथा भाइरस विश्व म हा मा रीको रुपमा आएको हो । ‘चैत पहिलो सातबाट राहु वायु तत्व अर्थात मिथुन राशिमा गएर बस्यो । राहु र केतुको संयोगका कारणले गर्दा व्याक्टेरिया तथा भाइरस विश्व म हा मारी को रुपमा आउने उनको दावी छ । उनले भिडियो सन्देश सार्वजनिक गर्दै भनेका छन्, राहुको बल प्रभावका कारणले गर्दा धेरै राग व्याधीहरु आउने ज्योतिष शास्त्रमा मान्यता रहेको छ ।
राहुका कारण उत्तरी ध्रुव अर्थात चीनबाट यो प्रारम्भ भएको पनि ज्योतिष उपाध्यायको दावी छ । पुसको १० गते सूर्य ग्रहण आरम्भ भएदेखिनै यसको प्रभावले व्यापकता पाएको र व्याक्टेरियाको प्रभाव बढेको उनको भनाइ छ । उत्तरी ध्रुबबाट यो दक्षिण पश्चिम हुँदै पूर्वी एशिया तिर व्यापक रुपमा फैलिएको छ । राहु अर्थात वायुतत्व मिथुनको घरमा रहँदा यस्ता खालका समस्या यसअघि पनि आउने गरेका थिए ।
अहिले केतु र वृहस्पति ९ अंकमा बसेका छन् । केतु क्रुर कारक ग्रहको रुपमा मानिन्छ । केतु क्रुर ग्रहको कारण हुनु । आध्रा नक्षत्रमा रहेको राहु मिथुनको घरमा गएर बस्दा अहिलेको महा मा रीको अवस्था बनेको ज्योतिषी डा उपाध्याय बताउँछन् । डा उपाध्यायका अनुसार नेपाल र भारतमा चैत्र महिना सम्म ग्रहका प्रभावले भाइरसरको त्रा स रहने सम्भावना रहन्छ । सूर्य ग्रह वैशाखमा उच्च भएसँगै यो स म स्या केही कम हुन जान्छ ।
सूर्य उच्च हुँदा त्यसको बल प्रभावले गर्दा राहु र केतुको प्रभाव खट्दै जाँदा त्यसको सकारात्मक असर देखिने छ । जसका कारण कोरोनाको नकारात्मक उर्जा कम हुँदै जानेछ । माघ फागुनमा सूर्य ग्रहको प्रभाव कम भएकाले कोरोनाको नकारात्मक उर्जाले जितेको डा ज्योतिष उपाध्ययायको दावी छ । सूर्य उच्च भएको खण्डमा यस्ता नकारात्मक चिज र उर्जाहरुको प्रभाव कम हुँदै जान्छ वा त्यस्ता चिजहरु नाश र शक्तिहीन हुँदै जाने ज्योतिषीय मान्यता रहेको छ ।
ज्योतिषी डा उपाध्यायका अनुसार विश्वभरबाट यो म हा मा री पूर्ण रुपमा कमजोर हुनका लाविग भदौ दोस्रो साता सम्मको समय लाग्ने यद्दी वैशाख शुरु भएसँगै नेपाल र भारतमा यसको प्रभाव कम हुने छ ।
ज्योतिष शास्त्रका अनुसार भदौंको दोस्रो साताबाट राहु वृष राशिमा जाने र केतु वृश्चिकमा प्रवेश हुन्छ । यस्तै राहु आध्रा नक्षत्रलाई छोडेर अघि बढ्ने भएकाले भदौंको दोस्रो साताबाट विश्वभर देखिएको महा मा री वा किटाणुको प्र कोप कम भएर जान्छ । दैनिक घरमा सर्सिउ, कपुर, सालधुप, गोकुल धुप मिलाएर हवन गरेको खण्डमा किटाणु वा व्याक्टेरियाको प्रभाव कम हुदै जाने भएकाले त्यसो गर्न पनि उनले सुझाव दिएका छन् ।
कसैलाई पनि नछुने र छुनुपरेमा नुहाउने वा शुद्ध हुने हिन्दु धर्म दर्शनमा उल्लेख गरिएको छ । जसलाई मानिसहरुले वेवास्ता र रुढीको रुपमा लिँदै आएका थिए तर अहिले कसैलाई छुन नुहने निश्चित दूरी भन्दा टाँढा बस्दा कोरोनावाट जोगिन सक्ने चिकित्सक र वैज्ञानिकहरुले बताएका छन् । अहिले हिन्दु धर्म र संस्कारमा उल्लेख भएको नमस्कार गर्ने प्रचलन पनि विश्वव्यापी भएको छ । नेपाल र भारतमा हिन्दु धर्म संस्कृति अनुसार एक अर्कालाई आदर दर्शाउँदा नमस्कार गर्ने प्रचलन छ । कोरोनाका कारण अहिले एक अर्कामा हात मिलाउन नमिल्ने भएकाले आदर जनाउँदा नमस्कार गर्न आग्रह गरिएको छ ।